Hambaawwan Dinqisiisoo Adduunyaa – siifsiin
Hambaawwan Dinqisiisoo Adduunyaa
Gimbii Chaayinaa Guddicha (The Great wall of China)
Dhaabbata barumsa aadaafi saayinsii mootummoota gamtoomanii (UNESCO)dhaan kan galmaa’an dinqisiisoo adduunyaa torban gidduudhaa tokko kan ta’e gimbii guddicha Chaayinaadha.Gimbiin guddichi Chaayinaa kan ijaarame, dhaloota Kiristoos dura waggaa 220 (220 B.C) jalqabamee xummuuruuf baroota dheeraa fudhate. Dheerinni gimbii kanaa walumaa galatti,k.m.21,196 si’a ta’u kan ijaarames Chaayinaa bahaa irraa hamma Chaayinaa dhihaatti kan diriiredha.
Innis kutaa biyya Chaayinaa bahaa Daandiingi jedhamurraa ka’ee hamma kutaa biyya Chaayinaa dhihaa Loopileeki jedhamutti kan diriiredha.Gimbiin Chaayinaa guddichi kun hambaa adduunyaa ta’ee UNESCO dhaan kan galmaa’e walga’ii mootummoota gamtoomanii adduunyaa a.l.A.bara 1987geggeeffame irrattidha.Gimbichi dhagaa,suphee,mukaafi biyyoo jabaa irraa ijaarame.
Kaayyoon gimbiin Chaayinaa guddichi kun itti ijaarame,daangaa Chaayinaa weerartoota alaa irraa of eeguufidha.Keessumaa Mongoolota weerartoota karaa kaabaan yeroo baayi’ee miidhaa irraan gahan irraa of eeguuf yaadameeti
Kaayyoon gara biraa gimbii kanaa, biyya Chaayinaa keessaa meeshota gadi bahaniifi ol seenan to’achuuf yaadameeti. Gimbiin kun buufata loltootaafi qooxii to’annoo qaba.
Previous Previous post: Hambaawwan Dinqisiisoo Adduunyaa Torban Isaa tokko
Next Next post: Yaa darggagootaa Baradhaa!